सुनको विमानमा उड्ने मलेसियाली राजाकी राजकुमारीले गरिन् कामदारसँग विवाह !:: Naya Nepal
काठमाडौं । हाम्रो शारीरमा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) कति समयसम्म जीवित रहन सक्छ ? यो धेरैलाई चासो लाग्ने विषय हो । पछिल्लो अध्ययन अनुसार कोरोनाभाइरस मानव छालामा ९ घण्टा सम्म बाँच्न सक्छ । यो प्रयोगशालामा पनि प्रमाणित भैसकेको छ । कोरोनाभाइरस इन्फ्लुएन्जा–ए भन्दा ४ गुणा लामो समयसम्म बाँच्न सक्छ ।
यो दाबी जापानको क्योटो प्रिफेक्चुरल मेडिसिन अफ मेडिसिनले आफ्नो शोधमा उल्लेख गरेको छ । यति लामो समय सम्म छालामा कसरी जीवित रहन्छ भनेर निश्चित गरिएको छैन । अनुसन्धानले भन्छ कि भाइरसलाई यति लामो समय सम्म छालामा राख्दा जोखिम बढ्छ । त्यसकारण कम्तिमा २० सेकेन्डको लागि साबुनले हात धुनु आवश्यक हुन्छ ।
मानव छालाको नमूनाहरू फोरेन्सिक एटोप्सी मार्फत अनुसन्धानका लागि लिइएको थियो । छाला कोषहरू कोरोनाभाइरस र इन्फ्लूएन्जा–एको नमूनाको साथ मिश्रित गरिएको थियो । अनुसन्धानले पत्ता लगायो कि छालामा फ्लू भाइरस १०८ मिनेटसम्म जीवित रहनसक्छ । उही समयमा, कोरोनाभाइरस ९ घण्टासम्म जीवित रहन्छ ।
अन्वेषकहरूका अनुसार श्वसन पथबाट लिइएको नमूना कोरोनाभाइरस ११ घण्टासम्म जीवित रहेको देखिएको थियो । त्यसलाई हाते स्यानिटाइजर प्रयोग गरेर भाइरसलाई २० सेकेन्ड भित्र हटाईयो । हाते स्यानिटाइजरमा ६० देखि ६५ प्रतिशत अल्को–हलरहेको थियो । त्यसकारण स्नानिटाइजर वा साबुन पानीले हात धुने गर्नुहोला ।
रोग नियन्त्रण र रोकथाम केन्द्रहरूको दिशानिर्देशहरूको अनुसार ६० देखि ९५ प्रतिशत अल्को–हलयुक्त स्यानिटाइजरले कम्तिमा २० सेकेन्डसम्म हात सफा गर्नुपर्छ । केवल त्यसपछि कोरोना भाइरसलाई हातबाट हटाउन सकिन्छ ।
माथि उल्लेख गरिएजस्तै २० सेकेन्डसम्म साबुन पानीले हात धुने गर्नाले पनि भाइरस हट्छ । जापानी वैज्ञानिकहरूले अनुसन्धान गरिरहेको कोरोनाभाइरस संक्रमणको जोखिम इन्फ्लूएन्जा–ए भाइरस भन्दा बढी हुने बताएका छन् ।